SD iyo Kaniisada Sweden oo ka dooday Islaamka | Somaliska
Dood dhex martay haweenayda baadariga ka ah Kaniisada Stockholm Eva Brunne iyo Hogaamiyaha xisbiga cunsuriga ee SD Jimmie Åkesson ayay ka doodeen arimo badan oo ay ku jirto Islaamka iyo Muslimiinta. Baadariyada ayaa sheegtay in ay fiicantahay in dadka soo galootiga ah ay la yimaadaan dhaqankooda hore, ayadoo mid ka mid ah dadka ka soo qeyb galay si caro leh u yiri "Islaamku waa diin dimoqraadiyada ka fog, sheeg qeyb ka mid ah shareecada oo aad rabi lahayd in Sweden laga dhaqan galiyo". Eve ayaa ku jawaabtay in Muslimiinta Sweden ay kula kulantay aysan ku dhaqmin shareecada iyo in aysan dooneyn in halkaan shareecada laga dhaqan galiyo ayadoo intaas ku dartay in suaashaas ay tahay mid adag oo dadka dooda ka soo qeyb galay aysan aqoon ku filan u lahayn Islaamka. Waxay sidoo kale sheegtay in xitaa Kiristaanka ay hore dad u soo laayeen markii ay weerari jireen Muslimiinta. Wariye ka mid ah dadkii ka soo qeyb galay dooda ayaa sheegay in khaar ka mid ah Muslimiinta ku nool Sweden ay ka soo carareen shareecada lafteeda. Åkesson ayaa kama dambeystii sheegay in uusan dhahayn in Muslimiinta ay doonayaan in ay halkaan shareeco ka dhaqan galiyaan. Cunsuriyiinta SD ayaa hore uga carooday haweeneydaan baadariga ka ah Kaniisada Sweden qeybteeda Stockholm ka markii furitaankii baarlamaanka ay ka jeedisay hadal duraya SD.
Dood dhex martay haweenayda baadariga ka ah Kaniisada Stockholm Eva Brunne iyo Hogaamiyaha xisbiga cunsuriga ee SD Jimmie Åkesson ayay ka doodeen arimo badan oo ay ku jirto Islaamka iyo Muslimiinta.
Baadariyada ayaa sheegtay in ay fiicantahay in dadka soo galootiga ah ay la yimaadaan dhaqankooda hore, ayadoo mid ka mid ah dadka ka soo qeyb galay si caro leh u yiri “Islaamku waa diin dimoqraadiyada ka fog, sheeg qeyb ka mid ah shareecada oo aad rabi lahayd in Sweden laga dhaqan galiyo”.
Eve ayaa ku jawaabtay in Muslimiinta Sweden ay kula kulantay aysan ku dhaqmin shareecada iyo in aysan dooneyn in halkaan shareecada laga dhaqan galiyo ayadoo intaas ku dartay in suaashaas ay tahay mid adag oo dadka dooda ka soo qeyb galay aysan aqoon ku filan u lahayn Islaamka.
Waxay sidoo kale sheegtay in xitaa Kiristaanka ay hore dad u soo laayeen markii ay weerari jireen Muslimiinta. Wariye ka mid ah dadkii ka soo qeyb galay dooda ayaa sheegay in khaar ka mid ah Muslimiinta ku nool Sweden ay ka soo carareen shareecada lafteeda.
Åkesson ayaa kama dambeystii sheegay in uusan dhahayn in Muslimiinta ay doonayaan in ay halkaan shareeco ka dhaqan galiyaan. Cunsuriyiinta SD ayaa hore uga carooday haweeneydaan baadariga ka ah Kaniisada Sweden qeybteeda Stockholm ka markii furitaankii baarlamaanka ay ka jeedisay hadal duraya SD.